दैनिकजसो विभिन्न ठाउँमा दुुई पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनले किचेर मानिसहरू मरेको सुन्ने र देख्ने गरिएको छ । घटना प्रहरी समाचारमा आउँछ र जान्छ । निर्दोष मानिसको व्यर्थमै ज्यान गएको घटनामा राज्य र समाजको कुनै संवेदनशीलता देखिंदैन ।
धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सेयर निष्काशन गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीका सेयरहरू किनबेचसँगै सेयरधनीहरू परिवर्तन भइरहन्छन् ।
स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनका मुख्य पक्षहरू
शिक्षा नै मानव स्रोत, सामाजिक, आर्थिक विकास तथा उन्नयनको आधार हो । वर्तमान संविधानमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासहित शैक्षिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्व कार्य स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र छ । मुलुकको संघीय संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने अलगअलग सरकारका लागि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
नेपाली शरणार्थी समस्या र समाधान
भुटानसँग शरणार्थी फिर्तीका लागि पहल गर्दागर्दै सबै भुटानी दाजुभाइ भुटान फर्कनुभन्दा तेस्रो देशमा आफ्नो भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन लागिरहेका छन् । पछिल्लो पटक सम्पन एनआरएनएको ८ औं सम्मेलनमा विभिन्न देशबाट आएका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा पनि लगभग सबैजसो नेपालीको उपस्थिति भएको देशमा बिनाभिसा नेपालीहरूको राम्रै जमात रहेको कुरा थाहा भएको थियो ।
चुलिदो व्यापारघाटाको चिन्ता
नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्र अँगालेको करिब तीन दशक पूरा भयो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै करका दर तथा संख्यामा कमी आई लगानी र व्यापारको उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको छ । विश्वका जुनसुकै मुलकसँग आयात–निर्यात व्यापार निर्वाध सञ्चालन गर्न सक्ने अवसर मिलेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा उल्लेख्य मात्रामा विस्तार भई स्वतन्त्र, स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धी बजार विस्तारमा टेवा पुगेको छ । वस्तु तथा सेवा छनोटको अवसरमा पँहुच वृद्धि भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि भई विप्रेषण आयले मुलुकी अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको छ ।
विकासको बाधक नेपाली चरित्र
नेपालका आर्थिक परिसूचकहरू मन्द गतिमा अघि बढेको छ । विकास नभएको होन, धेरै नै भएको छ तर जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यसका आधारमा भने हामी पछाडि नै छौं । स्रोत र सम्भावनाको आकलन गर्दा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय निकै माथि हुनुपर्ने हो, पूर्वाधार निर्माण र अन्य भौतिक निर्माणमा समेत हामी निकै अघि पुग्नुपर्ने हो ।
संघीयताको चेपोमा अर्थतन्त्र
अद्वितीय पोसाक भनेर नाङ्गो पारिएका बादशाहलाई पूरा सहर घुमाइयो, तर कसैले उनलाई सत्य भन्ने हिम्मत गरेनन्, किनकि जसले यो लुगा देख्दैन, त्यो मुर्ख हुन्छ भन्ने प्रचार गरिएको थियो । तर, न लेना न देना भएका केही बालकले ‘बादशाह त नाङ्गो पो छन्’ भनेर चिच्याएपछि बिस्तारै पाकाहरूमा गाइँगुइ चल्यो र अन्त्यमा सबैले भने बादशाह साँच्चिकै नाङ्गै छन् । स्कुलमा पढेको, ह्यान्स क्रिस्चियन येन्डरसनको यो कथा अहिले नेपालमा पूर्ण लागू भएको देखिन्छ, संघीयताको मामिलामा ।
दोहोरिइरहने तरलता समस्या
नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनको १३ नं. निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
योजनाबद्ध विकास र भावी कार्यदिशा
नेपालले योजनाबद्ध विकासका प्रयास थालेको ६ दशक कटिसकेको छ । यस अवधिमा १३ वटा योजना कार्यान्वयन भई हाल चौधौं योजनाको कार्यान्वयनमा छ । कुनै पनि योजना लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सफल भएनन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा चालू चौधौं योजना पनि लक्ष्य प्राप्तिमा सफल हुन सक्ने देखिंदैन । अघिल्ला योजनाहरू किन सफल हुन सकेनन् ? समस्याको जड के हो ? समग्र योजना प्रणाली चक्रमा कहाँनेर हामी चुक्यौं ? धरातलीय यथार्थलाई चटक्कै बिर्सेर अग्रगमनका नाममा बढी महत्वाकांक्षी पो भयौं कि ? लेखाजोखा गर्न न त योजना आयोगले रुचि देखायो, न त सरकारले नै आवश्यक ठान्यो ।